भारतीय इशारामा आइजीपी खनालः ७ महिनाअघि छाङ्गरुमा सशस्त्र नखटाउनुको रहस्य खुल्यो - Nepal Face
भारतीय इशारामा आइजीपी खनालः ७ महिनाअघि छाङ्गरुमा सशस्त्र नखटाउनुको रहस्य खुल्यो
८, जेठ २०७७
काठमाडौं । भारतले २०७६ कात्तिक १६ मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नै छाङ्गरु सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल राख्ने तय थियो । तर त्यो बेला सीमामा सशस्त्र प्रहरी बल किन राखिएन ? यो पक्षमा प्रायः कसैको ध्यान गएको छैन ।
त्यतिबेला नै सीमामा सशस्त्र प्रहरी राख्न सरकारले भने पनि आइजीपी शैलेन्द्र खनालले आलटाल गर्दैआएका हुन् । जसको परिणामस्वरुप २०७७ वैशाख २६ गते बिहान भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मानसरोवर जाने लिंकरोडअन्तर्गत धार्चुला–लिपुलेक खण्ड आफूले उदघाटन गरेको भन्दै ट्वीट गरे । यो ट्वीटलगत्तै सिंगो नेपाल आक्रोसित भयो । भारतविरुद्ध आवाज उठ्यो । र, सरकारले दार्चुलाको छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेको छ । किन भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै छाङ्गरुमा सशस्त्र पठाइएन त ? यसले नेपालका सुरक्षा अंगमा भारतीय प्रभाव कति छ भन्ने पुष्टी गर्दछ । भारतकै इशारामा छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरी बल पठाउन आलटाल गर्ने काम सशस्त्रका आइजीपी खनालले गरेको स्रोतहरु बताउँछन् । स्रोतका अनुसार उनले आफूलाई आइजीपी बनाउन भरपूर सहयोग गरेकाले नूनको सोझो गरी छाङ्गरुमा गएको कात्तिकमा सशस्त्र खटाउन रोकेका थिए ।
भारतीय दूताबासमा बडीगार्डसमेत नलिई सुटुक्क निजी गाडीमा जाने गरेको आरोप खनालमाथि लाग्दैआएको छ । उतैको निर्देशन अनुसार सीमा सुरक्षाका लागि गठन गरिएको सशस्त्रको संख्या १, २, ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका जिल्लाबाट घटाएर पहाडतिर थुपार्ने काम गरेपछि उनी आलोचित छन् ।
सीमा सुरक्षाका लागि गठन गरिएको सशस्त्रको मनोबल कमजोर बनाउन विगतमा लोकमानसिंह कार्कीलाई जुन शक्तिले प्रयोग गरी एकैपटक बहालवाला र पूर्व गरी ४ आइजीपी बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न लगाएको थियो, अहिले त्यही शक्तिले चार वटा प्रदेशका भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा सशस्त्रको दरबन्दी कटौती गर्न आइजीपी खनाललाई प्रयोग गर्दैआएको छ । त्यसकै इशारामा नै सशस्त्रका आइजीपी खनालले चार वटा प्रदेशका तराईका जिल्लाको दरबन्दी मन्त्रिपरिषदलाई समेत गुमराहमा राखी आफूखुसी कटौती गरेका थिए भने छाङ्गरुमा गएको कात्तिकमा सशस्त्रको टोली पठाउन समेत रोक्ने काम गरेका थिए । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिम्पियाधुराको मानसरोबर जाने सडक उदघाटन गरेपछि नेपालभर बिरोध भएकाले सरकारको कडा निर्देशनपछि उनले सशस्त्रको टोली पठाएका छन् ।
चार वटा प्रदेशमा सीमा सुरक्षा कार्यालय र राजमार्ग सुरक्षाका लागि गणमा पनि पर्याप्त संख्या राखिएको थियो । तर आइजीपी खनालले बोर्डरआउट पोष्टको संख्या बढाएको जस्तो देखाएर तिनमा ५ जना, ७ जना सशस्त्र प्रहरी राखेका छन् । सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली, कन्चनपुर जस्ता जिल्लामा दरबन्दी कटौती गरी डोटी, जुम्ला जस्ता जिल्लामा ७ सयको फौज पठाएका थिए ।
सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी खनालले भारतीय दूताबाससँग गहिरो सम्बन्ध बढाउन उसकै निर्देशनमा विवादास्पद सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई सशस्त्रबाटै सवारी चालक र बडीगार्डसमेत दिंदैआएका थिए ।
आइजीपी खनालको आदेशमा डीआइजी प्रवीण श्रेष्ठ कूटनीतिक आचारसंहिता विपरीत यही गाडीमा दूताबासमा गएका थिए । फोटो साभारः नयाँपत्रिका दैनिक ।
आइजीपी खनालमाथि हरेक हप्ता बडीगार्ड पनि नलिई स्यान्त्रो कारमा दूताबास धाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आइजीपी खनालका अति निकट र उनले सचिवालयमा राखेका डीआइजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठ कूटनीतिक आचारसंहिताविपरित गोप्यरुपमा भारतीय दूताबास गएको गाडी नम्बर सहित सार्वजनिक भएको थियो । सरकारसँग अनुमति नलिई ६ मंसिर २०७६ मा बा २ झ २३९० नम्बरको सरकारी गाडी चढेर उनी लौनचौरस्थित भारतीय दूताबास पुगेका थिए । उनीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्न सरकारले निर्देशन दिए पनि खनालले उनलाई पुरस्कृत गरी सचिवालय र प्रवक्ताको जिम्मा दिएका छन् । यसले पनि भारतीय दूताबासको प्रभाव सशस्त्र प्रहरीमा कति कसिलो छ भन्ने पुष्टी गर्दछ । उनको भारतीय दूताबाससँगको कनेक्सनबारे पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई पनि थाहा थियो । त्यही भएर राईले उनलाई विदेश भ्रमणमा समेत निकै कडिकडाउ गर्दैआएका थिए ।
२०६३ को शान्ति प्रक्रियापछि सशस्त्र प्रहरी संगठनलाई सीमा सुरक्षामा परिचालन गरिएको थियो । तर एपीएफले सीमा सुरक्षामा गतिलो प्रभाव देखाउन सकेको छैन । सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको एपीएफभित्र खनाल जस्ता प्रमुख भएकाले पनि भारतले लिम्पियाधुरामा सडक उदघाटन गर्न लागेको सूचना समेत सरकारले समयमै पाउन सकेन ।
जिम्मेवार ठाँउमा बसेकाले सरकारका सूचना भारतीय खुफिया एजेन्सीमा पु¥याउने काम गर्नेहरु को को हुन् सरकारले पहिला तिनको खोजी गर्नुपर्छ । सरकारका सूचना खुफिया संस्थामा पुर्याउनेहरु पानीमाथिको ओभानो बन्न रकम नै खर्चेर प्रचार गराउन उद्यत हुने गर्दछन् । त्यही काम सशस्त्रका आइजीपी खनालले गरेका छन् ।खनालले भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै किन छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको टोली पठाएनन् भन्ने बिषय सार्वजनिक भएपछि उनी भ्रमको खेतीमा लागेका छन् ।
आइजीपी खनाल प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार नै पल्टाउने खेलमा पनि जीवन आचार्यको डिजाइन अनुसार लागेका थिए । सरकारका विभिन्न तहमा सुरक्षाको नाममा सशस्त्रको जनशक्ति पठाउने र सबै सूचना अदृश्य ठाउँमा पुर्याउने काम खनालले गर्ने गरेको आरोप छ ।
बिहिवार, जेठ ८ २०७७०८:५१:४०